Yintoni idigoxin ityhefu?
Idigoxin ityhefu yenzeka xa une-digoxin eninzi emzimbeni wakho kwaye iba yingozi. I-Digoxin liyeza elisetyenziselwa ukunyanga ukusilela kwentliziyo okanye ii-arrhythmias (izingqisho zentliziyo engaqhelekanga). I-Digoxin ityhefu ingasongela ubomi.
Yintoni eyonyusa umngcipheko wedigoxin ityhefu?
Ezinye iimeko zonyango ezinje ngesifo sezintso, i-hypothyroidism, okanye isifo sentliziyo
Amanqanaba egazi asezantsi e-potassium okanye i-magnesium
Amanqanaba aphezulu egazi potassium okanye calcium
Ukusetyenziswa kwezongezelelo zemifuno eziqukethe izinto ezifanayo ne-digoxin
Ukusetyenziswa kwamayeza asebenzisana ne-digoxin enjenge-diuretics, i-calcium channel blockers, okanye amanye amayeza achaphazela indlela ebetha ngayo intliziyo yakho
Zithini iimpawu zetyhefu ye-digoxin?
Ukungabikho komdla, isicaphucaphu, ukugabha, okanye urhudo
Intloko, ukudideka, ixhala, okanye ukubona izinto ezingekhoyo
Ukuphumla, ubuthathaka, okanye uxinzelelo
Utshintsho kumbono onje ngombono opholileyo okanye ukubona iihalos ejikeleze izinto eziqaqambileyo
Ukukhawuleza, ukuphuza, okanye ukungahambi kakuhle kwentliziyo, okanye ukubetha
Ndiyithatha njani ngokukhuselekileyo i-digoxin?
Thatha i-digoxin ngokuchanekileyo njengoko kuyalelwe. Nxibelelana nomboneleli wakho wezempilo ukuba uphosa idosi okanye unemibuzo malunga nokuba ungayithatha njani i-digoxin.
Sukuyeka ukuthatha i-digoxin Ngaphandle kokuba umboneleli wakho wezempilo ukuxelele. Usenokuba nokunyusa ukubetha kwentliziyo okungaqhelekanga ukuba uyeka ukuthatha i-digoxin.
Thetha nomboneleli wakho wezempilo ngaphambi kokuba uthathe naziphi na izongezo zemifuno. Ezinye izongezo zemifuno ziqulethe izinto ezisebenza njenge-digoxin kwaye zinokubangela ityhefu.
Yiya kuzo zonke izikhundla zakho zokulandelela. Umboneleli wakho wezononophelo lwempilo kuya kufuneka akubeke esweni ngokusondeleyo ngelixa uthatha i-digoxin. Uya kudinga ukwenza uvavanyo lwegazi rhoqo.
Yintoni enye endinokuyenza ukuthintela i-digoxin ityhefu?
Nxiba ubucwebe bezilumkiso zonyango okanye uphathe ikhadi elithi uthatha i-digoxin. Buza ukuba ungazifumana phi ezi zinto.
Kufuneka ndenze ntoni ukuba ndicinga ukuba mna okanye umntu endimaziyo uthathe i-digoxin kakhulu?
Tsalela umnxeba iZiko loLawulo lweTyhefu ngo-1-800-222-1222 kwangoko.
Unomdla wokutya, isicupunu, ukugabha, okanye urhudo.
Unentloko, ukudideka, uxhalaba, okanye i-hallucinations.
Uziva ungonwabanga, ubuthathaka, okanye uxinezelekile.
Unalo naluphi na utshintsho kumbono njengokubona iihalos ezijikeleze izinto eziqaqambileyo.
Unentliziyo ekhawulezayo, ecothayo, okanye engaqhelekanga, okanye ukubetha kwentliziyo (ukukhawuleza, ukubetha kwentliziyo ngesinyanzelo esingaqhelekanga).
Uphose idosi yedigoxin.
ihlala ixesha elingakanani iziphumo ebezingalindelekanga ze-prednisone
indlela yokufumana ixabiso p
umqala obuhlungu iiveki ezi-2
Itshathi yokuhlela iziyobisi kwi-pharmacology